Abaxhasi bethu - Iinkonzo zezoMthetho zikaRhulumente wePrairie
Iinkonzo zoMthetho zikaRhulumente wePrairie zixhomekeke kwinkxaso yabantu, iziseko, imibutho kunye noluntu lwasekuhlaleni ukufezekisa injongo yethu yoncedo lwezomthetho. Singo ndinombulelo ongazenzisiyo kwaba balandelayo ngeminikelo yabo.
Amagqwetha ama-2021 abaNikeli bezoBulungisa
Iqhawe ($ 5,000)
Iintshatsheli ($ 2,500)
INkokeli ($ 1,000)
Umhlobo ($ 500)
Uluhlu lwe-2020 lwePrairie State kuLudwe lwabaNikeli
Cima ingxelo yakho yolwaphulo-mthetho! Dibana negqwetha SIMAHLA ngoLwesine, nge-30 kaJuni, ukusuka ngo-12:00-2:00 PM, kwiThala leeNcwadi loLuntu laseFreeport, 100 E. Douglas St., Freeport, IL. Funda nzulu: bit.ly/3lyAjqm	... Bona OkuninziJonga ngaphantsi
Sula iRekhodi yakho yoLwaphulo-mthetho, ngoJuni 30 kunye noJulayi 28 - Iinkonzo zoMthetho zasePrairie State
Cima ingxelo yakho yolwaphulo-mthetho. Dibana negqwetha MAHHALA ngoLwesine, nge-30 kaJuni kunye ne-28 kaJulayi, ukusuka ngo-12:00-2:00 PM, kwiThala leeNcwadi loLuntu laseFreeport, 100 E. Douglas St., Freeport, IL.